गौतमलाई ओलीको जवाफ : तपाईंलाई अंग्रेजी नै आउँदैन कसरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/गौतमलाई ओलीको जवाफ : तपाईंलाई अंग्रेजी नै आउँदैन कसरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ?
काठमाडौं : पार्टीमा एमसीसी प्रकरण पेचिलो बनिरहेका बेला केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई बालुवाटार बोलाए । कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने भनेर चर्चामा आउने गौतम ओलीले बोलाएपछि बालुवाटार पुग्ने नै भए । जब गौतम बालुवाटार पुगे ओली र गौतमबीच अन्तरंग कुराकानी सुरु भयो । त्यसक्रममा तत्कालिन एमाले माले हुदै अहिलेको नेकपा बन्दा सम्मका कुराकानी भए । यसमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै अघि बढेको ओलीले गौतमलाई स्मरण गराए ।
डाक्टरका अनुसार तपाईहरुको सहयोगले म बाँच्न सक्छु, सहयोग र सेयरको अपिल